Ukuqhathanisa Isifundi - Ungayithenga kanjani i-ebook
Okudumile ama-ereaders noma amabhuku e-elektroniki njengoba abantu abaningi bewabiza ngokuthi ama-ebook amadivayisi enzelwe ukufunda. Abayiphathi imidlalo, futhi nezicelo azifakwanga kwithebhulethi. Konke lapha kucabanga ukujabulela ukufunda. Ngakho-ke uma ungumthandi wencwadi, umfundi wakho we-ebook nakanjani uzoba umngani wakho ongenakuhlukaniswa.
Uma ucabanga ukuthenga i-ebook ngokwakho noma njengesipho, lokhu kuqhathanisa kanye nezincazelo nezeluleko esizokunikeza zona kuzokusiza ukuthi uthathe isinqumo.
Ukuqhathaniswa kwama-eReaders amahle kakhulu
Imemori / Iyanwebiseka
I-Kindle Paperwhite 6" 300dpi Yebo Yebo I-4Gb / Cha 129.99 €
UKobo Aura H2O 6'8 " 300dpi Yebo Yebo 4Gb / Yebo 201 €
I-Sony PRS-T3 Tamaño 300dpi Cha Yebo 2Gb / Yebo 222 €
I-Kindle 4 6" 166dpi Cha Yebo 4Gb Cha 79.99 €
I-Kobo Aura One Tamaño 300dpi Yebo Yebo 8Gb / Yebo 227 €
I-Bq Cervantes 3 6" 300dpi Yebo Yebo 8Gb / yebo 139.90 €
Ukuhamba ngomusa 6" 300dpi Yebo Yebo I-4Gb / Cha 189.99 €
I-Oasis yomusa 6" 300dpi Yebo Yebo I-4Gb / Cha 289.99 €
Abafundi abahamba phambili bango-2017
Ngikutshele kanjani ukuthi ufuna umuntu ongadla lapha unezinketho ezinhle kakhulu ozozithola. Laba ngabafundi abahamba phambili kakhulu emakethe njengamanje. Okokuqala, okungcono kakhulu, ireferensi ngaphakathi komkhakha futhi nenani elingcono lemali yi-Kindle PaperWhite evela e-Amazon
Inkosi yama-eReaders. Singasho ukuthi namuhla isetshenziswa kakhulu. Kuyisidlali sokuthinta esiyi-6 classic sakudala esingu-300 dpi esinokuzimela okuhle kakhulu nesikrini esikhanyisiwe lokho kuzosivumela ukuthi sifunde ebusuku. Isihloko sokukhanyisa sibalulekile, njengoba iThe Paperwhite ifinyelela umfaniswano, ukukhanyisa kwekhwalithi ephezulu. Ihlanganise i-Wi-Fi, kanye nama-gigs ememori ama-4 okuthi, noma engeke anwebeke, angaphezulu kokwanele. Ngaphezu kwalokho, i-Amazon isinikeza ifu layo elingenamkhawulo lamafayela athengwe esitolo sayo.
I-Paperwhite ibe ngumlandeli wohlobo oluyisisekelo futhi yize kunamamodeli amabili aphezulu avela e-Amazon, i-Voyage ne-Oasis "intengo yabo ayikuthetheleli ukuthengwa kwabo." I-Kindle Paperwhite inenani elingcono kakhulu lemali emakethe yabafundi ababhekwa njengezinga eliphezulu. Noma ngabe kwenzelwa wena noma isipho, kuyisibonelo esaziyo ukuthi ngeke sihluleke ngaso.
Ukuphazamiseka okuyinhloko ubuso be-Kindle ukuthi abangafundi amafayela ngefomethi ye-.epub, ethi yindinganiso yemakethe, bafunda kuphela ifomethi yabo. Okwamanje ngeqiniso akuyona inkinga ngoba kunezinhlelo esizisebenzisayo nsuku zonke njengeCaliber eziguqukayo bese sizithumela kumfundi ozifundelayo.
Uma ufuna ukwazi okwengeziwe ungafunda i- imibono yabantu abacishe babe ngu-7.000.
IKobo Aura H20
Kucatshangelwe umncintiswano omkhulu we-Kindle Paperwhite. Ine-pantallion engu-6,8 larger emikhulu kuneyendabuko. Ivumela ukubeka i-microSD futhi ifunda amafomethi amaningi kunama-kindles. Kepha ngokujwayelekile, ezingeni lobuchwepheshe, ngicabanga ukuthi bayafana, angicabangi ukuthi omunye ugqame kakhulu kunomunye. Umehluko wuhlobo lomkhiqizo (i-Kindle ivame ukwamukelwa kakhulu) namapulatifomu asekelwe kuwo ukuthi eSpain i-Amazon isetshenziswa kakhulu kunaleyo kaKobo.
Omunye wabafundi abasezingeni eliphakeme bakudala. I- AbakwaSony banedumela lokuba ngamadivayisi aqinile, athembekile futhi aqinile Futhi uma ukhuluma nomnikazi wanoma iyiphi yalezi zinsiza, uhlala ejabule. I-PSR-T3 nayo iyi-6 ″ futhi ngokungafani nabafundi ababili abadlule ayinakho ukukhanyisa. USony ubonakala eshiywe ngaphandle kumafashoni akamuva okufunda ngokungangeni empini yokukhanyisa.
Ngaphezu kokusebenza kwayo okungenaphutha kanye nokuhlangenwe nakho okuhle kakhulu kokufunda, ukuphela komuntu ofundayo osebenzisa ipeni, ipensela esingabhala ngalo amanothi. Kusiza kakhulu
I-Kindle 4 (Eyisisekelo)
Isikhathi eside ubedlula bonke. I-Kindle 1, 2, 3 futhi manje engu-4, konke okubizwa ngokuthi okuyisisekelo. Isifundi esilula futhi eshibhile (€ 79) Esinesikrini esingu-6 ″, bayenze yathinta ngokususa izinkinobho ezibonakalayo, kepha ayinaso isibani esakhelwe ngaphakathi. Isixazululo sayo siyi-166 dpi esikhundleni se-300 dpi yabafowabo abadala. Ake sithi udlala kwiligi ephansi. Uma ufuna i-ereader eshibhile lokhu kungenye yezinketho zakho ezinhle.
I-BQ Cervantes 3
Ifulegi lenkampani yaseSpain iBQ. I-BQ Cervantes 3 iyidivayisi enhle kakhulu, enezici eziningana ezithakazelisayo njengokuthi isoftware yayo ingumthombo ovulekile, ukuze umphakathi ukwazi ukuyiguqula, uyithuthukise futhi ukhiphe izinhlelo ezintsha. Okunye
I-Kobo Aura One
Ifulegi elisha lomkhiqizo waseCanada ovela eRakuten. Kuhle uma uthanda izikrini ezinkulu. I-6,8 Its yayo ayishiyi muntu engenandaba. 8Gb b yesitoreji esinwebekayo nge-microSD. i futhi imayelana nomfundi okhanyisiwe. FUTHIKuyidivayisi ekahle uma eyendabuko engu-6 ″ incane kakhulu kuwe. IKobo Aura One izomaka ngaphambi nangemva kwabafundi be-ebook.
Uma ungumuntu othanda imikhiqizo ekhethiwe, lokho konke okunakekelwe kahle, bheka i-Kindle Voyage noma i-Kindle Oasis. I-Voyage ukuvela kwe-Paperwhite. Isibonisi sithuthukisiwe, ukufana kokukhanyisa. Isisindo sedivayisi sincishisiwe futhi sithinte kepha izinkinobho zokuvula ikhasi ezizwelayo zifaka. Izinguquko zokuklanywa nemininingwane zinakekelwa ngokuningi. Kuyithuluzi elinezinzuzo zonke zesoftware esinikezwa yiAmazon futhi yaklanywa ngokucophelela okukhulu.
Es ukuphela okuphezulu kakhulu kwabafundi abangu-6 ″. Njengabazala bayo ine-touch screen, ekhanyisiwe, njll. Izinto ezintsha kule divayisi ukuthi isencane futhi ilula kune-Voyage, ine-asymmetric ergonomic design futhi enamakhasi akhombisa izinkinobho ukuthi iqiniso ukuthi labo esibajwayele bayabakhumbula kakhulu uma bengekho .
Ukukhanyisa kwenziwe ngcono ngokungeza ama-LED amaningi angama-60%, okuthuthukisa kakhulu ukufana.. Inesistimu yokushaja embaxambili, idivayisi necala kukhokhiswa ngasikhathi sinye, ngakho-ke uma ilayishwa, leli cala linikeza amandla ku-ereader futhi singalisebenzisa izinyanga ngaphandle kokulishaja futhi.
Uma ufuna izifundi ezingabizi kakhulu, bheka indatshana yethu enabafundi be-ebook abashibhile, lapho uzothola khona imikhiqizo namamodeli angabizi ngenani elikhulu lemali.
Yini okufanele uyibheke lapho uthenga i-ereader
Isifundi se-ebook, yize singumkhiqizo ohambele phambili kwezobuchwepheshe, sinezici ezimbalwa okufanele sizibheke kunamanye amadivayisi afana nama-smartphone noma amaphilisi.
Kusukela esikrinini sibheka ubukhulu. Ukufundwa okujwayelekile kunakho okungu-6 ″, noma kukhona amanye ama-7 ″, 10 ″, njll kepha kukhona okuhlukile. Ngaphezu kwalokho, kuzofanele sibheke ukuthi ayithinteki yini, uma inokukhanya (sikhuluma ngokukhanyisa, ukukhanya, izikrini zomuntu ofundayo ziyinki ye-elekthronikhi uma bekhuluma nge-Backlighting akuyona i-ereader noma uma kuyi-screen isitayela sethebhulethi ye-TFT futhi amehlo amathayi lapho efunda)
Izigubhu. Ngokungafani namanye amadivayisi akuyona into enqumayo. selokhu abafunda i-e-ink noma i-elekthronikhi begcina kusuka emasontweni ambalwa kuya ezinyangeni ezimbalwa ngaphambi kokuthi bavuselelwe kabusha. Kunoma ikuphi, njengakuyo yonke into, kuhle njalo ukubukeka nokuthi kungcono kangakanani.
Ipulatifomu kanye nemvelo
Ngaphandle kokungabaza ukuthi i-eReader yethu ingeyomphakathi oqinile lapho ixazulula ukungabaza nezinkinga zethu nokuthi inekhathalogi enkulu yokukusiza.
Uma ufuna imininingwane eningiliziwe noma usibuze imibuzo, faka eyethu umhlahlandlela wokuthenga we-ereader ne-ebook
Ngemuva kokuhlaziya zonke izinketho emakethe Namuhla ukuncoma kwethu njengedivayisi ehamba phambili, okungukuthi, ukuphela okuphezulu okulinganiselwe yi-Kindle Paperwhite. Izokunikeza isipiliyoni somsebenzisi esihle kakhulu kakhulu njengomfundi ngentengo efanele nangokuzethemba okuza ngokuba ne-Amazon ngemuva kwakho uma kungenzeka kube nenkinga. Impela ngakho konke lokhu uyiNKOSI
Mhlawumbe usafuna ukuhlola imakethe kakhulu futhi lokho kunemikhiqizo eminingi namamodeli amaningi, ziningi kakhulu ukuba zingabhalwa endaweni eyodwa. Ngizokushiyela izibonelo ezithile. Uma sikhuluma ngemikhiqizo futhi yize kukhona eminingi futhi eminingi engaziwa, lapha eSpain kufanele sicabangele i-Kindle evela e-Amazon, Kobo, NooK, Tagus de la Casa del Libro, i-BQ, i-Sony, iPapyre de Grammata phakathi abanye. Kufanele futhi sikhulume nangabanye abafunda okuyi "brand white" njenge-Carrefour's ereades, evela e-Alcampo.
Ubona kanjani? Kunezinhlobonhlobo zabafundi emakethe nezinto eziningi okufanele uzicabangele. Uma unemibuzo, shiya amazwana bese sizozama ukukusiza.